၂၀၁၉မှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်လာမယ့် ဖက်ရှင်Trend (၇) ခု -
Posted on February 7, 2019 February 8, 2019 Author Stella	Comment(0)
ဒီနှစ်မှာ သူမတူအောင် အပီအပြင်လန်းဖို့ ယောင်းမှာ ဒါတွေရှိပြီလား ?
တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် မတူနိုင်တဲ့ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းအတိုင်း သူ့ထက်ငါအပြိုင်လန်းနေချိန်မှာ ယောင်းအနေနဲ့ ခေတ်နောက်ကျကျန်မနေခဲ့ဖို့ လိုပြီနော်။ ဒီတော့ ၂၀၁၉ မှာကော ဘယ်လို fashion တွေက ရေပန်းစားလာနိုင်ခြေရှိလဲဆိုတာ Stella နဲ့အတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်…
၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က စပြီး ခေတ်စားလာတဲ့ ဘလေဇာကုတ်တွေကို ၂၀၁၉ မှာလည်း ဆက်တွေ့နေရဦးမှာပါ။ ဘလေဇာကုတ်တွေကို စတိုင်လ်ပန့်စ်တွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ဝတ်ဆင်တာက ဒီနှစ် trend ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရောက်နေပါတယ်။ ဆယ်လီဘရစ်တီ တော်တော်များများ ဝတ်လာတာတွေ့ရပြီး စမတ်ကျကျ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အသွင် ဖြစ်စေလို့ ယောင်းမှာလည်း ဘလေဇာကုတ် တစ်ထည်တော့ ရှိသင့်နေပါပြီနော်…
(၂) Animal Prints
အရင်နှစ်တွေတုန်းက တိမ်မြှုပ်နေခဲ့တဲ့ animal prints တွေကလည်း ဒီနှစ်မှာ တစ်ခေတ်ပြန်ထလာနိုင်ချေရှိနေပါတယ်။ ခပ်လန်းလန်း ကျားသစ်ကွက်အင်္ကျီတွေ၊ မြွေအရေခွံ စကတ်တွေ၊ မြင်းကျားစင်းတွေက ခေတ်အစားဆုံးဖြစ်လာနိုင်တာမို့ အခုထဲကပြေးဝယ်ထားလိုက်ပါတော့ ယောင်းရေ…
Related article >>>Paris Fashion Week ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်က အမိုက်ဆုံး Street fashion လေးတွေ
(၃) Puff Sleeves (လက်ဖောင်းအင်္ကျီ)
Stella တို့ မေမေတွေ ငယ်ငယ်ကဝတ်ခဲ့တဲ့ ပုခုံးဖောင်းဖောင်း အင်္ကျီကြီးတွေကို သိတယ်ဟုတ် ? အဲဒီအင်္ကျီကြီးတွေလဲ ဒီနှစ်ထဲမှာ ပြန်ဝတ်လာကြတော့မှာပါတဲ့နော်။ မေမေပြောတဲ့ ဖက်ရှင်က တစ်ပတ်ပြန်လည်တတ်တယ်ဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ 😀
(၄) Faux Leather
ဘယ်တော့မှမရိုးတဲ့ သားရေတုစကဒ်တွေကိုလည်း runway တော်တော်များများမှာ တွေ့နေရတာမို့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ရေပန်းစားလာမယ့် ဖက်ရှင်တွေထဲမှာ ပါလာမယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ Stella ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗီရိုထဲမှာ ခပ်မိုက်မိုက် လယ်သာစကဒ် ဒါမှမဟုတ် ဂျက်က်တစ်ထည်လောက်ရှိနေတာတော့ မမှားဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ ယောင်းတို့ရော ဘယ်လို မြင်ကြလဲ??
၂၀၁၉ မှာတော့ အစိမ်းတောက်တောက် ပန်းရောင်တောက်တောက်လိုမျိုး Neon color တောက်တောက်တွေက ပိုခေတ်စားလာမှာပါ။ အင်္ကျီအရောင် တောက်တောက်တွေ မဝတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ neon အရောင်တွေနဲ့ အိတ်သေးသေးတစ်လုံးတော့ ရှိသင့်ပါတယ်နော်..
(၇) Boiler Suit
Street style ဘက်မှာဆိုရင်တော့ boiler suit တွေက ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်လာနိုင်ချေ ရာခိုင်နှုန်း များနေပါတယ်။ Boiler suit ကို accessories တွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ဝတ်ဆင်ကြတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ဖက်ရှင်တွေကို ဒီနှစ်ထဲမှာ အများအပြားတွေ့ရဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
ကဲ…ဒီဖက်ရှင်တွေထဲက ဘယ်နှစ်ခုလောက် ယောင်းဆီမှာ ရှိနေပြီလဲ? မရှိသေးလည်း ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူးနော်.. ပြောနေကျအတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုက အလန်းဆုံး ဖက်ရှင်ပါပဲလို့.. 😉
ဒီနှဈမှာ သူမတူအောငျ အပီအပွငျလနျးဖို့ ယောငျးမှာ ဒါတှရှေိပွီလား ?
တဈနှဈနဲ့ တဈနှဈ မတူနိုငျတဲ့ ဖကျရှငျရစေီးကွောငျးအတိုငျး သူ့ထကျငါအပွိုငျလနျးနခြေိနျမှာ ယောငျးအနနေဲ့ ခတျေနောကျကကြနျြမနခေဲ့ဖို့ လိုပွီနျော။ ဒီတော့ ၂၀၁၉ မှာကော ဘယျလို fashion တှကေ ရပေနျးစားလာနိုငျခွရှေိလဲဆိုတာ Stella နဲ့အတူကွညျ့လိုကျကွရအောငျနျော…
၂၀၁၈ နှဈကုနျပိုငျးလောကျက စပွီး ခတျေစားလာတဲ့ ဘလဇောကုတျတှကေို ၂၀၁၉ မှာလညျး ဆကျတှနေ့ရေဦးမှာပါ။ ဘလဇောကုတျတှကေို စတိုငျလျပနျ့ဈတှနေဲ့ တှဲဖကျပွီး ဝတျဆငျတာက ဒီနှဈ trend ရဲ့ ထိပျဆုံးမှာ ရောကျနပေါတယျ။ ဆယျလီဘရဈတီ တျောတျောမြားမြား ဝတျလာတာတှရေ့ပွီး စမတျကကြ အမြိုးသမီးတဈယောကျအသှငျ ဖွဈစလေို့ ယောငျးမှာလညျး ဘလဇောကုတျ တဈထညျတော့ ရှိသငျ့နပေါပွီနျော…
အရငျနှဈတှတေုနျးက တိမျမွှုပျနခေဲ့တဲ့ animal prints တှကေလညျး ဒီနှဈမှာ တဈခတျေပွနျထလာနိုငျခရြှေိနပေါတယျ။ ခပျလနျးလနျး ကြားသဈကှကျအင်ျကြီတှေ၊ မွှအေရခှေံ စကတျတှေ၊ မွငျးကြားစငျးတှကေ ခတျေအစားဆုံးဖွဈလာနိုငျတာမို့ အခုထဲကပွေးဝယျထားလိုကျပါတော့ ယောငျးရေ…
Related article >>>Paris Fashion Week ခရီးစဉျတဈလြှောကျက အမိုကျဆုံး Street fashion လေးတှေ
(၃) Puff Sleeves (လကျဖောငျးအင်ျကြီ)
Stella တို့ မမေတှေေ ငယျငယျကဝတျခဲ့တဲ့ ပုခုံးဖောငျးဖောငျး အင်ျကြီကွီးတှကေို သိတယျဟုတျ ? အဲဒီအင်ျကြီကွီးတှလေဲ ဒီနှဈထဲမှာ ပွနျဝတျလာကွတော့မှာပါတဲ့နျော။ မမေပွေောတဲ့ ဖကျရှငျက တဈပတျပွနျလညျတတျတယျဆိုတာ သိပျမှနျတာပဲ 😀
ဘယျတော့မှမရိုးတဲ့ သားရတေုစကဒျတှကေိုလညျး runway တျောတျောမြားမြားမှာ တှနေ့ရေတာမို့ ဒီနှဈထဲမှာ ရပေနျးစားလာမယျ့ ဖကျရှငျတှထေဲမှာ ပါလာမယျလို့ သုံးသပျသူတှေ ရှိနပေါတယျ။ Stella ကတော့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဗီရိုထဲမှာ ခပျမိုကျမိုကျ လယျသာစကဒျ ဒါမှမဟုတျ ဂကျြကျတဈထညျလောကျရှိနတောတော့ မမှားဘူးလို့ မွငျပါတယျ။ ယောငျးတို့ရော ဘယျလို မွငျကွလဲ??
၂၀၁၉ မှာတော့ အစိမျးတောကျတောကျ ပနျးရောငျတောကျတောကျလိုမြိုး Neon color တောကျတောကျတှကေ ပိုခတျေစားလာမှာပါ။ အင်ျကြီအရောငျ တောကျတောကျတှေ မဝတျခငျြဘူးဆိုရငျတောငျမှ neon အရောငျတှနေဲ့ အိတျသေးသေးတဈလုံးတော့ ရှိသငျ့ပါတယျနျော..
Street style ဘကျမှာဆိုရငျတော့ boiler suit တှကေ ရပေနျးအစားဆုံးဖွဈလာနိုငျခြေ ရာခိုငျနှုနျး မြားနပေါတယျ။ Boiler suit ကို accessories တှနေဲ့ တှဲဖကျပွီး ဝတျဆငျကွတဲ့ ခပျမိုကျမိုကျ ဖကျရှငျတှကေို ဒီနှဈထဲမှာ အမြားအပွားတှရေ့ဖို့ မြှျောလငျ့ထားပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
ကဲ…ဒီဖကျရှငျတှထေဲက ဘယျနှဈခုလောကျ ယောငျးဆီမှာ ရှိနပွေီလဲ? မရှိသေးလညျး ကိစ်စတော့ မရှိပါဘူးနျော.. ပွောနကေအြတိုငျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုက အလနျးဆုံး ဖကျရှငျပါပဲလို့.. 😉
Tagged Fashion, tips, trends, what to wear, women
ခရီးသွားတဲ့အခါ အတွင်းပစ္စည်းတွေကို သေချာထုပ်သိမ်းကြမယ်
Posted on November 19, 2018 November 19, 2018 Author Hnin Ei Oo
အတွင်းပစ္စည်း ထုပ်တာကလည်း ပညာသားပါသဟ -_-
Posted on December 26, 2018 December 26, 2018 Author Megan
ဖွေးသန့်နေတဲ့ အဖြူရောင် Sneaker လေးတွေ ညစ်ပတ်သွားတဲ့ အခါ အသစ်အတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင် ဒီလိုတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်…